कसरी सफल भईन्छ अन्तरवार्तामा ? | bethanchokkhabar.com
शनिबार, भाद्र १४, २०७६ | ९:२३:५५ |
कुनै पनि आयोग संस्थान वा अन्य निकायहरुबाट कर्मचारी छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि परीक्षा संचालन गरिन्छ ।यसरी लिने परीक्षा लिखीत, मौखिक वा लिखित मौखिक दुवै हुन सक्दछन् । लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगका साथै अन्य संस्थानमा कर्मचारी भर्ना गर्दा दुवै परीक्षा संचालन गरी लिने व्यवस्था छ ।
लिखीत परीक्षामा उत्तीर्ण भईसकेपछि सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित रही मौखिक परीक्षा हुन्छ । वास्तवमा मौखिक परीक्षाको चरण अत्यन्त संवेदनशील समेत रहन्छ ।
कैयौँ प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछि पार्दै महत्वपुर्ण लिखीत परीक्षा पास गरिसकेपछि छनौटको संघारमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले यो चरणमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।
यो चरणमा स्पर्धीको सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञान सहनशीलता, प्रस्तुतिकरणको शैली, संवाद शैली र अन्य व्यवस्थापकीय कुराहरुको ल्याकत परीक्षण हुन्छ ।
के हो अन्तरवार्ता ?
शब्दबाट नै स्पष्ट हुन सकिन्छ कि अन्तरवार्ता भनेको निश्चित विषयवस्तुमा आधारित रही प्रश्नोत्तर शैलीमा गरिने संवाद हो । कुनै पनि पदका लागि चाहिने विषयगत ज्ञान त लिखीत परीक्षामा नै जाँच गरिसकिएको हुन्छ, तर उमेदवारको मानसिक, संवेगात्मक र व्यवहारिक ज्ञान जाँच्न नै अन्तरवार्ता लिन लिइन्छ । कोठामा प्रवेश गरेको समयदेखिकै उमेदवारको धैर्यता, सत्यता, कौशलता र चातुर्यता समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ‘वाच’ गरिराखिएको हुन्छ ।
अधिकांश प्रतिस्पर्धीहरुले यसको मर्मलाइ बुझेतापनि व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न कठिन रहेको देखिन्छ । फलस्वरुप मनोवैज्ञानिक जाँचमा अन्तरर्वाताकारसँग झर्किने, चर्को बोल्ने साथै म अन्तरवार्ता दिने प्रतिस्पर्धी हूँ भन्ने धरातल समेत बिसर्ने गरेको पाईन्छ । वास्तवमा अन्तरवार्तामा बस्दा विषयवस्तुमा धेरै ज्ञान भएको जस्तो गर्ने, नचाहिँदो कुरामा अन्तरवार्ता लिनेसँग आगर््यु गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु गर्नु हुँदैन ।
के गर्ने के नगर्ने अन्तरवार्तामा बस्दा ?
सर्वप्रथम अन्तरवार्ता हुने मिती समय र स्थानका बारेमा पहिले नै सुसुूुचित रहने जसले गर्दा पूर्वतयारीका विषयवस्तुहरुमा केन्द्रित भइने र आत्मबल बढ्नुका साथै मानसिक रुपमा तयार भइन्छ । अन्तरवार्तामा जने अघिल्लो दिनमै शारीरिक सरसफाइ गर्ने, लगाएर जानै पोशाक आईरन गर्नुपर्ने भए गरी चटक्क मिलाउने ।
अत्यन्त तडकभडक देखिने भद्धा र नमिल्ने तरिकाले पोशाक नलगाउने । भद्र, सभ्य र आकर्षक देखिने । सरल प्रकृतिका र सजिला कपडाहरु लगाइ जाने । अन्तरवार्ता कक्षमा प्रवेश गर्दा सभ्य, शालिन, र हँसिलो मुहारसहित प्रवेश गर्ने । प्रवेश गरिसकेपछि उपस्थित अन्तरवार्ताकारहरुलाई सरल र एकमुष्ठ सम्बोधन गर्ने ।
प्रश्न सोध्ने व्यक्तिले बस्नुस् भनेपछिमात्र धन्यवाद दिँदै तोकएको सिटमा बस्ने । अन्तरवार्ता प्राय व्यक्तिगत परिचयबाट शुरु हुने हुँदा सरल, छोटो र पुर्ण जानकारीसहित आफ्नो परिचय दिने । सोधिएका प्रश्नहरुलाइ ध्यानपूर्वक सुन्ने र राम्रोसँग बुझेपछि मात्र जवाफ दिने गर्नुपर्छ ।
त्यहाँ सोधिएका सबै प्रश्नहरुका उत्तर जानिन्छ नै भन्ने हुँदैन, यसर्थ प्रश्नहरुको उत्तर नजान्दा हतोत्साहित हुने, अनुहारको रङ्गमा परिवर्तन देखाउने, लामो सास फेर्ने, नाक वा कानमा हात लैजाने, कपाल कनाउने, खुट्टाले भुईँ खोस्रने जस्ता अस्वभाविक क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन ।
अन्तरवार्तामा कहिलेकाहीँ उमेदवारको मनोविज्ञान जाँच्नका लागि हुँदै नभएकोकुरालाइ पनि हा जस्तो गरी सोध्ने, वा यस्तो हो नि तपाइँलाई थाहा छ होला नि त भन्ने जस्ता कुराहरु पनि साधिन सक्छन् । अत यस्तो अवस्थामा अरुले जेसुकै भनेपनि आफुलाई यकिन नभएको कुरालाइ होमा हो मिलाउने, हजुर भन्ने वा कुनै इशारा मार्फत स्वीकार्ने गर्नु हुँदैन ।
नजानेको प्रश्नलाइ जान्दिन, आउँदैन भन्न हिच्किचाउनु हुँदैन । वास्तवमा अन्तरवार्ताकारले प्रश्नको उत्तरभन्दा बढी सम्बन्धित पदमा छनौट गर्दा उक्त व्यक्तिले कार्यसम्पादनको शिलशिलामा आइपर्ने समस्या चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्दछ, वा सक्दैन भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न चाहेका हुन्छन् ।
व्यक्तिमा भएको नेतृत्व सीप, व्यवस्थापकीय शैली, संगठनमा उसले देखाउन सक्ने स्वभाव साथै सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहार अन्तरवार्ताबाट जान्न खोजिन्छ । तसर्थ, प्रश्नको सही वा गलत जवाफ दिएँ वा दिइन भन्ने विषयले खासै महत्व राख्दैन । अत माथि उल्लेखित विषयवस्तुलाइ व्यवहारमा उतार्ने गरी उच्च आत्मबल र अनुशासित तरिकाले प्रस्तुत हुन सकेमा अन्तरवार्तामा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
हाम्राे प्रतिबद्धतापत्र झुटकाे पुलिन्दा हाेइन : तारा राना तिमल्सिना
समृद्ध र उत्कृष्ट गाँउपालिका बनाउने छौं : भगवान अधिकारी
समृद्धिको जगमा छानो हाल्न मेरो उम्मेदवारी : भीम न्यौपाने
‘हामी मालिक होइनौं, जनताका सेवक हौं ‘: पनौती मेयरका उम्मेदवार न्यौपाने
‘स्थानीय सुशासन नगर विकासको पहिलो आधार’ : उम्मेदवार रञ्जितकार
‘धुलिखेलमा दिगो विकास गरी नेपालकै अग्रणी नमूना नगरको रुपमा स्थापित गर्ने छौं,’ : उम्मेदवार ब्याञ्जु